AIZA NO ALEHA : Karibotel – Analakely
Mpanakanto roa samy manana ny tontolo misy azy nefa atambatry ny zava-kanto. Hiara hiaka- tsehatra etsy amin’ny Karibotel Analakely i Mbola Talenta sy Poon anio amin’ny 8 ora sy sasany alina. Raha any amin’ny tontolon’ny …Tohiny
Minisitry ny Tetibola : «Tsy maintsy miasa ny fadintseranana»
Mbola mitohy ny fitokonan’ny mpiasan’ny fadintseranana ankehitriny. Manoloana izay indrindra anefa, nanambara ary nitondra ny heviny ny minisitry ny Vola sy ny Tetibola, Gervais Rakotoarimanana, fa tsy maintsy miasa ny mpiasan’ny fadintseranana. Marihina sy araky …Tohiny
Navoakan’ny minisitry ny Fitsarana Charles Andriamiseza am-pahibemaso, omaly, nandritra ny famaliana ny fanontaniana nivantana avy tamin’ireo loholon’i Madagasikara, tetsy amin’ny lapan’ny Antenimieran-doholona Anosy, ny fisian’ny mpitsara iray nihoa-pefy ka voatery noroahina. Misy rafitra iray ato …Tohiny
Namaly avy hatrany ny MLE izay nilaza fa tsy hanatrika ilay fampivondronana hoentina hanovana ireo andininy mampisavorovoro anatin’ny lalana mifehy ny serasera ny minisitra Harry Laurent Rahajason « Rehefa tsy handray anjara ny MLE tsy terena …Tohiny